Diiwaanka Qosolka : Ninkii Qaadka ee Transitka ahaa – Somali World
Home Xidigaha & Filmada Diiwaanka Qosolka : Ninkii Qaadka ee Transitka ahaa
Xidigaha & Filmada Xidigaha Caalamka
Diiwaanka Qosolka : Ninkii Qaadka ee Transitka ahaa
Comments Off on Diiwaanka Qosolka : Ninkii Qaadka ee Transitka ahaa
Nin reer Berbera ahaa ayaa Qaadka si xun u jeclaa. Wuxuu kale oo ahaa nin aad uga muxtarim ah bulshada dhexdeeda, gaar ahaan magaaladaasi Berbera ee uu ku nolaa. Haddaba waxaa dhacaysa in ninkan odayga ahi uu maalin maalmaha ka mid ah uu Qaad guri soo dhiganayo, si uu ugu soo noqdo qadada ka dib. Iska cun qadadiisii, waxaanu ku soo laabanayaa halkii qaadku u sii yaalley. Iyada oo aanay ka qasnayn oo sahii qaadku hayo, una sii miliqsanaya oo iska foodh foodhyaya, ayuu imanayaa gurigii uu qaadka sii dhigtay. Waxa wejiga ku dhufanayaa gurigii oo quful weyn oo aad u ballaadhan lagu jebiyey!!!
Inta uu aad u naxo oo is hayn kari waayo, ayuu guriga gidaarkiisii dhabanka saarayaa bal si uu u dhegaysto inay guriga cidi ku jirto iyo in kale. Illayn waa nin Qaad hayaaye wuxuu is tusayaa gurigii oo lagu dhex jiro oo laga dhex hadlayo oo isaga mala-awaalkiisa ah. Gurigani waxa uu ka mid yahay guryihii yaryaraa ee sekedaha ku yaalley (amaba dhowr guri oo isku dheggan). Dabadeed wuxuu tegayaa gurigii ugu kooneeyey ee sekedda ku yaalley oo uu gidaarkiisa fuulaayaa. Wuxuu rabaa inta uu derbigii laynka ahaa ee guriyahaas oo dhan ka dhaxeyn jirey soo fuulo markuu dhowr guri soo dhaafo uu gurigii uu rabey daaradda ugaga soo dhaco, maadaama ay guriyahani leeyahiin daarad u bannaan hawada; kulka aawadiis.
Haddaba waxa dhacaysaa isagoo ku gurguuranaya derbigii ay lahaayeen reerihii kale ee gurigii uu ku socdey ka kooneeyey, ayaa markuu laba guri dhaafo, isagoo maraya gurigii saddexaad oo aan weli gaadhin gurigii uu rabey, uu ka soo dhacayaa derbigii. Halkaasuu sidii bombka ugu soo dhacayaa guri ay leeyihiin reero qalaad oo aan ahayn gurigii uu ku socdey. Nasiib darro waxaa dhacaysa in reerkii uu gurigooda ku soo dhacay ay deg-deg ugu soo cararayaan dhinicii daaradda bal si ay u ogaadaan maqaadiirta ku soo habsatay xaafaddoodii. Waxa indhaha qac lagu siiyey ninkii oo daaraddoodii jiifa oo dhinacaa is haya xannuun dartii, il-qoodhana ka eegaya dadkan ku soo buuqay oo uu xishoodna dhinac kaga jiro, isagoo maskaxdiisa boqol jeer u kala tirinaya Qaadkaas markiyey waxaas oo foolxumooyin ah.
Haddaba waxaa dhacaysa inay gartaan carruurtii qaar ku soo xoomay oo ay yidhaahdaan,”Allah, oo waa hebele!” iyagoo ay wejigooda yaab fara badani uu ka muuqdo. Markaa intuu naxo illayn waa nin weyn oo khashifmaye, ayuu odhanayaa si xanuun leh; “Aaaa, Aaaa, Aar waa Hebeloo Transit ahe”, isagoo u jeeda inuu sidii diyaaradahii intay meel ku sii nastaan ku ahaan jiray transitka. Micnihii idinka idiinma aanan socone gurigaa kale ayaan ku socdaa.
Previous article Daawo sidii Xidigaha Geesku Hargeisa ugu Soo Dhaweeyen MUNA KAY
Next article Snapchat oo Haifa Wehbe Kaligeed u Fasaxay wax dadka kale loo diiday
More In Xidigaha & Filmada
Nancy Ajram Fanaanada ugu Iibka Badan Uguna Saamaynta Badan Bariga Dhexe 2017
Xidigada caanka ah ee reer Lubnaan Nancy Ajram ayaa magazineka caalamiga ah ee Forbes u do…
Daawo Fanaan Reer Burco ah oo Jeclaaday Halimo Gobaad
Fanaanka Sacad Jumayka oo ah fanaaninta raga ah ee dhawaan kasoo caan baxay magaaladas aya…
Daawo Jawaabaha Fanaaniin caan ah oo la weydiiyay Fanka inay ka Bixi doonan?
Halkan ka daawo Related …
Daawo TOP10 Fanaaninta Dumarka ee Hore & Kuwii Dhexe oo Ku Heesaya Bilaa Music
Daawo Aishwarya Rai oo Gabadheedi Yareed Ku Xaragoonaysa Mahrajaanka Cannes
Atirshada caanka ah ee Aishwarya Rai ayaa mar labaad kasoo muuqatay mahrajaanka Cannes iya…
Hooyadii Loogu Jeclaa Bollywood REEMA LAGOO oo Geerideedu Ka Nixisay Salman & Shahrukh Khan
Reema Lagoo oo ahayd atrishad weyn oo ku caan ahayd filmada bollywood iyo musalsalada dalk…
Daawo Salman Khan iyo Katrina Kaif oo Dubai Filmkooda Cusub Ku Duubaya
Xidigada quruxda badan ee Katrina Kaif ayaa barteeda instgram ku faafisey sawir uu ku wehe…
Load More In Xidigaha & Filmada
DAAWO HALIMO GOBAAD OO MUUQAAL HEES CUSUB SOO SAARTAY
DAAWO WACDARAHA ASMA LOVE GULLED SIMBA HALIMO GOBAAD